Trano | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Fanomanana ny fandriana ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, dingana iray mitaky fomba fiasa manokana. Ny fahombiazan'ny legioma mihamitombo dia miankina amin'ny toerana misy azy sy ny endriny. Izany no mahatonga ny fanontaniana hoe ahoana no fomba hanaovana ny fandriana ao anaty trano fonenana iray mahaliana ny ankamaroan'ny mpamboly. Ny efitrano ao amin'ny trano fonenana dia miorina amin'ny kardinaly. Ny fomba hidirana ao amin'ny trano fivoahana dia tokony hodinihina eo amin'ny sehatry ny fametrahana azy.
Manamboatra lakaly iray amin'ny tananao manokana
Ny efitrano fandefasana voankazo ho an'ny voankazo, legioma, vokatra ary fitaovana samihafa. Noho ny haavon'ny haavon-tsavony sy ny toetry ny mari-pahaizana, ny vala dia toy ny "cooler" ho an'ny vokatra, ary mamela anao hitazona azy ireo maharitra ela. Matetika no ilaina ny lakandrano any amin'ny trano sy trano fonenana.
Manangana barìka izahay mba hanolotra ny tanany haingana sy tsy misy vidiny
Mazava ho azy fa sarotra be ny tsy fisian'ny tranom-bitsika. Io fitaovana zaridaina io ihany no napetraka. Ambioka. Ny vokatra vokatra. Bike. Wheelbarrow. Eny, zavatra maro. Mba tsy hitarihana ny trano iray manontolo, dia misy lay. Mazava ho azy, azonao atao ny manakarama mpanorina, ary izy ireo dia hanao ny zava-drehetra ho anao. Saingy azo atao ny manamboatra tranom-barotra amin'ny tananao, raha fantatrao ny fahasamihafana amin'ilay fantsika.
Ny fototra ho an'ny trano fonenana miaraka amin'ny tanany: karazana, soso-kevitra, sary
Maro ireo zaridaina, izay manapa-kevitra ny hanangana trano fonenana ao amin'ny tranokala, tsy mieritreritra ny fototra azo antoka. Mazava ho azy, ny trano fonenana dia tsy rafitra fototra ary kely ny entana eo amin'ny tany. Noho izany, maro ireo mino fa ny fototra azo antoka dia ilaina fotsiny ho an'ny tranobe zaridaina fototra, ary azo ametrahana mivantana eo amin'ny tany ny trano fonenana maivana tsotra.
Manaova fambolena amin'ny tananao
Olona tsy manambady avy amin'ny mololo ao an-tanimboly sy zaridaina any an-tanindrazantsika dia tsy afaka ny hihaona intsony. Izy io dia mikasika ny angidina! Lalao mahatalanjona nandritra ny taonjato maro no niaro ny vokatra tamin'ny fahafatesana. Ary ankehitriny, hadinoy izao, ary tsy misy ilana azy. Angamba tsy ilaina intsony ny fiakaran-tsoavaly toy ny mpiaro avy amin'ny biby madinika na vorona. Na izany aza, ny singa haitao dia tsy nofoanana.
Isika dia manondraka ny zaridaina
Ny zavamaniry dia biby fiompinay, fa matetika izahay no tsy afaka miaraka amin'izy ireo amin'ny famantaranandro. Raha fantatrao io olana io, tandremo ny fandroana automatique amin'ny zaridaina zaridaina sy zaridaina - tsy vitan'ny hoe mitsidika anao isan'andro avy any amin'ny trano fonenana, fa mamonjy vola ihany koa. Aza mieritreritra fa ny "automatique" dia midika fitaovana mahagaga, izay, hany ka handoavana penny tsara.
Ny mpihaza vorona no manao azy amin'ny fitaovana hosoka
Ho an'ny biby fiompy dia ahafahanao manamboatra takelaka na karazan-tsakafo isan-karazany. Matetika ireo tavoahangy plastika, boaty misy bala na plywood no ampiasaina ho an'ny mpamatsy. Ny tranokao vita dia mihantona eo amin'ny hazo na hazo, ary azo afatotra amin'ny rindrin'ny tranobe.
Ny karazana sy ny endriky ny fananganana gazebos hanome tanana
Tsy misy faritra maoderina any an-tanandehibe tsy azo eritreretina raha tsy misy fivoahana gazy mahavariana, izay ahafahanao misotro dite mangatsiatsiaka, miara-mipetraka amin'ny namanao na miaina ny rivotra madio rehefa mankafy ny natiora. Miankina amin'ny fomba hijerena ny arofanina, ny hatsaran'ny fitsaharana dia miankina. Fivarotam-bokatra an-tsena Summer Gazebo no iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny teti-bola ao amin'ny tranon'ny firenena iray.
Trollis ho an'ny voaloboka dia manamboatra azy io
Ny fanapahan-kevitra hiditra amin'ny fambolena voaloboka, dia tokony ho raisina an-tsaina fa ity zavamaniry ity dia lian-tahaka, tsy manana endrika iray, noho izany dia mila fanohanana izy. Ny roa taona aorian'ny famolavolana ny kirihitr'ireo voaloboka dia mitaky fanampiana vonjimaika - tsatòka. Roa taona taty aoriana, ilaina ny fananganana fanohanana maharitra.
Fanamboarana trano fandroana vita amin'ny hazo amin'ny tanany
Rehefa mikarakara ny faritra ambanivohitra ianao dia mila manao, aloha indrindra, ny fizarana ny faritaniny amin'ny ilàna azy ary mitaky ny fiheverana voalohany ny trano. Anisan'izany ny efitra fandroana na toeram-pivoahana. Raha tsy misy izany, ny trano fonenana dia ho sahirana toy ny efitrano hafa na zavatra hafa. Ny fanorenana ny trano fidiovana dia tsy maintsy tantera mifanaraka amin'ny fepetra momba ny fahadiovana voalaza ao amin'ny antotan-dalàna.
Manangana fefy ara-barotra amin'ny tanany manokana isika
Ny fehezam-boninkazo dia zavatra mahaliana sy mahafinaritra. Ny halavan'ny fefy dia mety miankina amin'ny fanirian'ny mpanjifa. Ekeo fa matetika ianao no mety hiatrika ilay fanontaniana hoe ny fanapahana fefy avo dia fanapahan-kevitra tsy rariny. Mety ho noho ny zavatra maro, anisan'izany ny tsy fahampian'ny estetika.
Trano fandraisam-bahiny no manao izany
Ny trano na ny trano fonenana no tsara indrindra ho an'ny fikarakarana ny sakafom-bovoka kely misy anao, izay mamela ny fotoana hialana amin'ny sakafo matsiro, siny, voangory na trondro. Ny fananganana ny trano fialofana dia tsy mitaky vola be ara-bola na fahalalana lalina momba ny fanorenana, ary ny vokatra dia mihoatra ny zavatra andrasana rehetra, satria tsy misy iray amin'ireo fivarotam-bokatra tena tsara indrindra azo ampitahaina amin'ny sakafo homemade vita amin'ny tananao.
Ny teknôlôjia amin'ny fananganana tohotra amin'ny polycarbonate dia manao izany
Ny tranom-bakoka dia karazana toeram-pofon-trano izay natao hiarovana amin'ny karazam-bary rehetra. Tany am-boalohany, dia nisy tranobe toy izany. Fotoana fohy taorian'izay dia nanomboka nanamboatra toeram-pialofana avy amin'ny orana teny amoron-dàlana sy tsena ny fakàn-trano. Taranaka taranaka aorian'ny taonjato maromaro aorian'ny taonjato, dia nitarika ny hoe ny habetsahan'ireo horohoron-tany dia nanjary tsy fantatra loatra.
Mandritra ny firenena mandroso - manome toky sy hafanana
Ny trano fonenana dia manome foana toe-tsaina miabo, na fitsaharana tanteraka avy amin'ny fiainana andavanandron'ny fiainana an-drenivohitra. Ny olona iray na fotoana ela na ho haingana dia toy ny hoe irery miaraka amin'ny ala, renirano, biby, lanitra, masoandro araka izay azo atao. Manome azy fiadanana sy fahatsapana lehibe izany. Voaro "avy any an-danitra ho etỳ an-tany" izao.
Fomba amina saha. Ataovy singa miavaka ny endriny
Ny lalana amoron-dalana dia mihoatra noho ny fantsom-pandehanana fotsiny izay ahafahanao mihetsika manodidina ny zaridaina. Tsy mitondra ny enta-miasa fotsiny izy io, fa koa singa iray amin'ny famolavolana ny tranonkalanao. Noho izany dia zava-dehibe ny fisehony amin'ny endriny mifanaraka amin'ny endriky ny tontolo manodidina.
Ny anaran'ny tenany dia miresaka momba ny haben'io trano io. Na dia eo aza ny fahasamihafan'ny habakabaka amin'ny trano fivoahana, dia toy izany ny zaza toy izany miaro ny zavamaniry amin'ny vokadratsin'ny tontolo iainana. Ny mini-greenhouse dia heverina ho endrika kely. Ny tranokala toy izany dia nahazo nalaza noho ny fanamorana ny fametrahana, ny lanjany ary ny vidin'ny vidiny.
Tendrombohitra maivana malefaka, maharitra sy maharitra, "Agronom"
Ny fampiasana ny modelim-pitrandrahana maimaim-poana "Agronom" dia azo raisina ho iray amin'ireo vahaolana faran'izay tsara indrindra amin'ny fahombiazan'ny asa, sy ny fahatsorany sy ny fahamendrehan'ny famolavolana. Ireo singa mifandraika amin'ny fampiasana fitaovana maoderina dia manavaka azy io eo amin'ny sehatry ny trano fonenana mahazatra ary manome fahafahana hahazo vokatra mendrika rehefa mampitombo ny zana-ketsa eny an-tany malalaka.
Ireo toro-làlana dia nahitàna mpamboly hetsi-banana ao anaty trano fonenana
Ny fanatrehana sompitra goavam-be ao amin'ny saha misokatra ao amin'ny toetrantsika tsy dia azo antoka dia asa tsy azo atao. Noho izany, maro kokoa ny mpamboly zavamaniry no misafidy ho an'ny tenany ny safidy ny mitombo cucumbers ao amina trano fonenana. Na izany aza, na dia amin'ity fomba ity aza dia ilaina ny mianatra ireo fitsipika fototra ary mianatra ny tsiambaratelon'ny fahazoana ny isan'ny voankazo farafaharatsiny mandritra ny vanim-potoan'ny fahavaratra.
Fambolena voajanahary ao anaty trano fandroana "Kabachok" "polycarbonate"
Ny trano fandroana antsoina hoe "Zucchini" dia ampiasaina amin'ny fambolena zavamaniry kely. Anisan'izany ireo tongolobe, voatabiha, zucini ary maro hafa. Ireo fitaovana toy izany dia mora ny mamory, tsy mila fitaovana fanampiny amin'ny fametrahana ianao. Ireo endri-tsoratra teknika Ny fototry ny rojo dia metaly metaly. Ny haben'izy ireo dia 25x25 mm.
Hazo voajanahary tsara indrindra amin'ny tanimboly madinika ho an'ny zana-ketsa
Fantatry ny zaridaina za-draharaha fa ny zana-ketsa eny an-dalambe dia mahery lavitra noho ny zavamaniry indostrialy. Rehefa tonga ny andro mafana voalohany, dia ilaina kokoa ny manala ireo zana-ketsa avy amin'ny toeram-pambolena, mba hanjonoana sy hahazatra ny rivotra iainana. Mba hiarovana azy io mandritra io vanim-potoana io, dia ampiasaina manokana ny trano famatsian-drano manokana sy trano fandroana madinika.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Trano